Post Date 2021-07-21 10:08:10
अन्य धेरै मान्यता र कथनजस्तै यो गीत पनि छोरीहरूको सपनाको हत्यारा हो। केटी मानिसले ‘म पाइलट बन्छु, डाक्टर बन्छु या म वैज्ञानिक बन्छु अर्थात् मलाई जे मन लाग्यो, त्यो बन्छु’ भन्ने भाष्य हाम्रो समाजले बनाएकै छैन। यस्ता खालका गीतै हामीले रचेका छैनौँ। कथंकदाचित् छोरी मान्छेका सपना र योजनाका गीत कसैले सिर्जना नै गरेका भए पनि हाम्रो समाजको रुचिमा परेनन् र सुपरहिट भएर हाम्रा स—साना नानीबाबुलाई पार्टीमा नचाउन लायक बनेनन्। त्यस्ता गित गाइएका भए पनि तिनका म्युजिक भिडिओले करोडौँ दर्शक÷स्रोता पक्कै पाउने थिएनन्।
पछिल्लोपटक हिट बनेको अर्को चर्चित गीत हो– जसलाई युट्युबमा ७ करोड पटकभन्दा बढी हेरिएको÷सुनिएको छ– कहिले गोरी मन प¥यो, कहिले काली मन प¥यो, ससुराली टेकेपछि साली मन प¥यो, ए ससुरा बा मलाई साली मन प¥यो, लौन ससुरा बा मलाई साली मन प¥यो। उसो त ‘साली’ लामो समयदेखि हाम्रो समाजमा रोमाञ्चकता र यौनिकताको सजिलो बिम्व हो। केही दशकअघि ‘ख्यालख्यालमै दिल बस्यो कान्छी सालीमा’ गीतबाटै गायक बद्री पंगेनीले काठमाडौँमा राम्रै सम्पत्ति जोडेको चर्चा उतिखेर मिडियाले गरे।
समाजशास्त्र भन्छ, ‘साहित्य समाजको ऐना हो।’ र, हाम्रो समाजको ऐना हेर्दै गर्दा देख्छौँ– केटाले चाह्यो भने स्वास्नीका बहिनी पनि अरू भौतिक सम्पत्तिसरह भोगचलन गर्ने सांस्कृतिक सामर्थ्य राख्छ। ससुरा र सासूसँगै निर्धक्क ‘तिम्री अर्की छोरीलाई पनि म स्वास्नी बनाउन सक्छु’ भनेर हाँक दिन सक्छ। तर समाज यस्ता मान्यताप्रति कहिल्यै प्रश्न गर्दैन, उल्टै मलजल गरिरहन्छ। यी गीतबारे पनि बिरलै सार्वजनिक रूपमा प्रश्न गरिएका छन्। बजारको पार्टी–प्यालेसको स्पिकरमा गीत बजिरहन्छन्, उता सासू–ससुरा, स्वास्नी र सालीसँगै भिनाजु पनि रक्सीको तालमा ‘साली मन पर्यो’ गाउँदै छिल्लिरहन्छ।
दोष ज्वाइँको मात्र होइन, ससुरा बा, सासू, श्रीमती वा सालीको पनि होइन। किनभने उनीहरू लामो समयदेखि समाजले जस्तो बनायो, त्यस्तै बने। र, असन्तुलित लैंगिक अभ्यास र व्यवहारका लागि कोही दोषी छ भने त्यो हाम्रै समाज हो। यसको बोधो चेतना। र, यो समाजको बोधो चेतना बौरिन्छ कि भन्ने ठान्दै म यस्तो प्रतिउत्तर ‘प्यारोडी’ रच्न पुग्छु ः ​
कैले बदाम मन प¥यो, कैले काजु मन प¥यो,
ए सासूआमा मलाई जेठाजु मन प¥यो
तिम्रो ठामै मन प¥यो, तिम्रो कामै मन प¥यो
ए झिल्के देवर तिमी अति मन प¥यो
साँच्चै, यिनै शब्द हामीले सुरिलो स्वर र मधुर संगीतमा गीत बनाउने हो भने सुपरहिट बनेर नेपाली बजारमा सर्वप्रिय होला या नहोला? अनि यसमा लोग्ने र सासू–ससुराहरूले आफ्ना भाइ र स्वास्नी सँगसँगै चम्कीचम्की नाचेको दृश्य निर्धक्क स्वीकार्न सक्लान्? देवरसँग भाउजू नाच्ने कुरा सम्झिँदा तपाईंलाई दिगमिग लाग्छ भने स्त्रीलाई अनेक रूपमा ‘कमजोर र केवल भोग्या’ ठान्ने परम्परागत रुग्ण धारणा त्याग्न तयार हुनुहुन्छ त? एकलकाटे र स्त्रीभोग्या समाजका भाष्य भत्काउन तयार हुनुहुन्छ? (नेपालखबर)...